Philippe Coutinho Oo Afka Furtay, Shaki Xoog Lehna Geliyey Mustaqbalkiisa Barcelona – Cadalool.com
Philippe Coutinho Oo Afka Furtay, Shaki Xoog Lehna Geliyey Mustaqbalkiisa Barcelona
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa sii xoojiyey wararka suuqa ee tibaaxaya inuu ka fikirayo inuu iska tago Camp Nou oo sannad iyo xoogaa uu joogay uu ku guul-darraystay inuu ka samaysto boos joogto ah, sidoo kalena ciyaarihiisii lagu yaqaanay uu kusoo bandhigi kari waayey.
Kubb-sameeyaha hore ee Liverpool ayaa Camp Nou ku qaatay 14 bilood oo xaaladdiisu ku jirtay mugdi kaddib markii uu bishii January ee sannadkii hore £142 milyan oo Gini ugu soo biiray Barcelona.
Courtinho oo ay da’diisu tahay 26 jir ayaa diiday inuu meesha ka saaro suurtogalnimada inuu iska dhaqaaqo Barcelona oo 62 kulan oo uu u saftay uu u dhaliyey 19 gool dhamaan tartamada, balse ciyaartii Lyon ayaa siisay kalsooni kale iyo inay niyaddu u yara degto.
Laacibkan oo lala xidhiidhinayo kooxo badan oo ay ka mid yihiin PSG iyo Manchester United, ayaa waraysi uu siiyey telefishanka laga leeyahay dalka Spain ee Movistar+ waxa uu ku sheegay in Barcelona uu ugu biiray si uu u caawiyo, xirafaddiisana ugu soo bandhigo laakiin ay illaaa hadda waxba si fiican ugu socon la’ yihiin.
“Toddobaadyadii ugu dambeeyey, xataa bilihii u dambeeyey, si fiican umaan ciyaaaraynin, laakiin weli waxaan doonayaa inaan horumar sameeyo.” Ayuu yidhi.
Coutinho waxa uu intaas kaddib ka hadlay mustaqbalkiisa, waxaanu bixiyey ishaaro muujinaysa inaanu ku faraxsanayn Barcelona, waxaanu yidhi: “Waxaan u imid Barcelona inaan sida ugu wanaagsan u caawiyo. Waqtigan waan noolahay, balse ma garan kartida waxa mustaqbalka dhici kara.”
Xiddiga reer Brazil oo hadalkiisa sii wata waxa uu qiimayn ku sameeyey bandhig ciyaareedkiisii kulankii Lyon ay ku burburiyeen 5-1, waxaanu yidhi: “Waan ku faraxsanahay bandhigaygii ciyaartii Lyon.”
Laacibkan ayaa ka hor intii aanu ku biirin Barcelona, waxay Liverpool kasoo iibsatay sannadkii 2013 Inter Milan iyadoo kasoo bixisay £8.5 milyan kaliya, laakiin January 2018 ayey Barcelona kaga iibisay £142 Milyan.
201 kulan oo uu u saftay Liverpool, waxa uu u dhaliyey 54 gool, balse waxa uu udub dhexaad u ahaa ciyaar qurux badan oo naadigaasi uu garoomada kusoo bandhigayey, halka shaqsiyana uu ka ahaa xiddiga hoggaaminayey safka Jurgen Klopp.